Archive du 07-déc-2020
Homamiadana mpahazo ny vehivavy 500 000 hatramin'ny 1800 000 Ariary ny fitsaboana
Ny homamiadana no antony fahatelo mahatonga fahafatesana eto Madagasikara. 23500 eo ny isan'ny trangana homamiadana vaovao eto isan-taona. Ny 50 % ireo dia homamiadana mpahazo ny vehivavy na "cancer gynécologique"avokoa.
GFEM sy ny Fondation Akbaraly Hiara-hiasa akaiky mandritra ny 3 taona
Nanatanteraka fifanaovan-tsonia maha-mpiara-miasa azy ny GFEM (Groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar) sy
Ambondrona Parfum I Antso no be mpankafy
Miavaka aminireo vokatra efa famoakanny tarika ity, hoy i Cédric Rakotoarivelo raha nanatrika ny famoahana
Manao "sport"...ireo fikoloana tarehy mila atao
Tsy maintsy atao fahazarana ny mikolo ny endrika amam-bika mialoha, mandritra ary ao aorianny fanaovana fanatanjahantena. Mbola betsaka mantsy ny vehivavy tsy mahalala, na diso hevitra, mikasika izay fikoloana tokony atao
Vovo-bary : Manatevina volo, manazava ny tarehy,
Tafiditra ao anatinny fianakaviam-benny « féculents » ny vary. Foto-tsakafontsika Malagasy izy ary manome ny 20 % -nny hery ilainny vatana.
Nampirafesina aho dia namindrany aretina. Lasa mamoaka tsiranoka maimbo miloko matroka ny fivaviako,
mangidihidy mafy ihany koa misy fotoana ary mangirifiry indraindray. Izy anefa milaza fa tsy nanao na inona na inona. Izy anefa, azoko antoka, no namindra aretina tamiko fa tsy mety mitsotra izy. Ahoana no ataoko?
Gilasy aminny letisia
Akora ilaina Letisia 20 isa efa novoasana sy noesorina ny voany
Melvin Adrien Nanao asa soa maro vao nody
Ny sabotsy alina teo i Melvin Adrien mpiandry haraton'ny Barea Madagascar no nandao an'i Madagasikara, taorian'ny
Te hampihena fe ...ireo sakafo fadiana
Tsy dia tsara tokoa ny mahita fe somary vaventy raha mihoatra ny vatana manontolo. Ahoana ny atao mba hampihenana io faritra io ? atoronay anao .
Mandoa ...tsaboy ifotony sao aretin-dratsy
Tsy midika ho zavatra tsara foana ny fandoavana fa porofo fa misy tsy milamina ao anatinny vatana. Raha tsy hay ihany koa